Indlela yokuqinisekisa uQinisekiso lwe-imeyile yakho lumiselwe ngokuchanekileyo (DKIM, DMARC, SPF) | Martech Zone
Ukuba uthumela i-imeyile kulo naluphi na uhlobo lomthamo, lishishini apho uthathwa ngokuba unetyala kwaye kufuneka ubonakalise ubumsulwa bakho. Sisebenza kunye neenkampani ezininzi ezibancedisayo ngokufuduka kwabo kwe-imeyile, ukufudumala kwe-IP, kunye nemiba yokuhanjiswa. Uninzi lweenkampani aziqondi nokuba zinengxaki kwaphela.
Iingxaki ezingabonakaliyo zokuhanjiswa
Kukho iingxaki ezintathu ezingabonakaliyo ngokuhanjiswa kwe-imeyile amashishini angazaziyo:
Imvume Ababoneleli ngenkonzo ye-imeyile (ESP) lawula iimvume zokungena... kodwa umboneleli wenkonzo ye-intanethi (ISP) ilawula isango ledilesi yemeyile yokufikela. Yinkqubo embi ngokwenene. Unokwenza yonke into ngokufanelekileyo njengeshishini ukufumana imvume kunye needilesi ze-imeyile, kwaye i-ISP ayinalo nofifi kwaye inokukuvalela nokuba kunjalo.
Ukufakwa kwebhokisi lemiyalezo engenayo -ESPs zikhuthaza phezulu ukuhanjiswa amaxabiso abubudenge. I-imeyile ethunyelwa ngokuthe ngqo kwifolda yenkunkuma kwaye engazange ibonwe ngumrhumi wakho we-imeyile ihanjiswa ngobuchule. Ukuze ubeke iliso lakho ngokwenene ukubekwa ebhokisini, kufuneka usebenzise uluhlu lwembewu kwaye uhambe ujonge kwi-ISP nganye. Kukho iinkonzo ezenza oku.
Ubume -Ii-ISPs kunye neenkonzo zomntu wesithathu zikwagcina amanqaku odumo ngokuthumela idilesi ye-IP ye-imeyile yakho. Kukho uludwe lwabamnyama olunokuthi lusetyenziswe zii-ISPs ukuvala yonke i-imeyile yakho ngokupheleleyo, okanye unokuba negama elibi elinokwenza ukuba usiwe kwisiqulathi seefayili eziyinkunkuma. Kukho inani leenkonzo onokuthi uzisebenzise ukujonga isidima sakho se-IP… kodwa ndingathanda ukuba nethemba kuba uninzi bengenalo ulwazi lwe-algorithms ye-ISPs nganye.
Ezona zenzo zilungileyo zokunciphisa nayiphi na imiba yokubeka ibhokisi yangaphakathi kukuqinisekisa ukuba umisele inani leerekhodi ze-DNS ezinokuthi ii-ISPs zisebenzise ukujonga kwaye ziqinisekise ukuba ii-imeyile ozithumelayo zithunyelwa nguwe ngokwenene hayi ngumntu ozenza inkampani yakho. . Oku kwenziwa ngenani lemigangatho:
Inkqubo-sikhokelo yoMgaqo-nkqubo wabaThumeli (SPF) - owona mgangatho wakudala ujikeleze, kulapho ubhalisa khona irekhodi le-TXT kubhaliso lwakho lwesizinda (DNS) echaza ukuba yeyiphi imimandla okanye idilesi ye-IP oyithumelayo nge-imeyile yenkampani yakho. Umzekelo, ndithumela i-imeyile Martech Zone ku Indawo yokusebenzela kaGoogle na I-CircuPress (eyam i-ESP ngoku ikwi-beta). Ndine-plugin ye-SMTP kwiwebhusayithi yam endinokuthi ndiyithumele ngeGoogle, kungenjalo bendiya kuba nedilesi ye-IP ebandakanyiweyo koku ngokunjalo.
thambeka-esekelwe kuMyalezo woQinisekiso, ukuNika iNgxelo kunye nokuThobela (I-DMARC) - lo mgangatho omtsha unesitshixo esifihliweyo esinokuqinisekisa zombini i-domain yam kunye nomthumeli. Isitshixo ngasinye siveliswa ngumthumeli wam, eqinisekisa ukuba ii-imeyile ezithunyelwe ngu-spammer azikwazi ukumoshwa. Ukuba usebenzisa iGoogle Workspace, nantsi indlela yokuseta i-DMARC.
DomainKeys Imeyile echongiweyo (I-DKIM) - Ukusebenza kunye nerekhodi ye-DMARC, le ngxelo ikwazisa ii-ISPs ukuba ziziphathe njani i-DMARC yam kunye nemithetho ye-SPF kunye nalapho zithunyelwa khona naziphi na iingxelo zokuhanjiswa. Ndifuna ii-ISPs zale nayiphi na imiyalezo engagqithisi i-DKIM okanye i-SPF, kwaye ndifuna ukuba zithumele iingxelo kuloo dilesi ye-imeyile.
Izikhombisi zeBrand zokuchonga uMyalezo (IBIMI) - ukongeza olutsha, i-BIMI ibonelela ngeendlela ze-ISPs kunye nezicelo zabo ze-imeyile ukubonisa uphawu lwe-brand ngaphakathi komthengi we-imeyile. Kukho zombini umgangatho ovulekileyo kunye ne umgangatho ofihliweyo weGmail apho ufuna kwakhona isatifikethi esifihliweyo. Izatifikethi zixabisa kakhulu ngoko ke andikwenzi oko okwangoku.
QAPHELA: Ukuba ufuna uncedo ekusetheni nayiphi na isiqinisekiso sakho se-imeyile, ungalibazisi ukufikelela kwifemu yam. Highbridge. Sineqela le Iingcali zentengiso ye-imeyile kunye nokuhanjiswa oko kunokunceda.
Uyiqinisekisa njani i-imeyile yakho
Lonke ulwazi lomthombo, ulwazi oludluliswayo, kunye nolwazi lokuqinisekisa olunxulunyaniswa ne-imeyile nganye lufumaneka ngaphakathi kwemibhalo engasentla kwemiyalezo. Ukuba uyingcaphephe yonikezelo, ukutolika ezi zinto kulula kakhulu… kodwa ukuba ungumfundi oqalayo, zinzima kakhulu. Nantsi indlela isihloko somyalezo esijongeka ngayo kwileta yethu yeendaba, ndiye ndakhupha ezinye zee-imeyile eziphendulayo kunye nolwazi lwephulo:
Ukuba uyayifunda yonke, unokubona ukuba ithini na imigaqo ye-DKIM yam, nokuba iDMARC iyapasa (ayipasi) kwaye i-SPF iyadlula… kodwa ngumsebenzi omninzi lowo. Kukho i-workaround engcono kakhulu, nangona kunjalo, kwaye kufuneka isetyenziswe Isidambisi seDKIM. I-DKIMValidator ikubonelela ngedilesi ye-imeyile onokuthi uyifake kuluhlu lwencwadana yakho okanye uyithumele nge-imeyile yeofisi… kwaye baguqulela ulwazi olungasentla kwingxelo entle:
Okokuqala, iqinisekisa uguqulelo oluntsonkothileyo lwe-DMARC kunye notyikityo lwe-DKIM ukubona ukuba iyadlula na (ayigqithi).
Emva koko, ijonga irekhodi yam ye-SPF ukubona ukuba iyadlula (iyenzeka):
Kwaye okokugqibela, indinika ukuqonda kumyalezo ngokwawo kunye nokuba umxholo unokuphawula ezinye izixhobo zokukhangela i-SPAM, ijonga ukubona ukuba ndikuluhlu lwabamnyama, kwaye indixelele ukuba ingaba iyacetyiswa na ukuba ithunyelwe kwifolda yenkunkuma:
Qiniseka ukuba uvavanya yonke i-ESP okanye inkonzo yemiyalezo yomntu wesithathu leyo inkampani yakho ithumela i-imeyile kuyo ukuze uqinisekise ukuba uQinisekiso lwe-imeyile lucwangciswe ngokufanelekileyo!
Vavanya i-imeyile yakho nge-DKIM Validator
Ukubhengezwa: Ndisebenzisa ikhonkco lam lokudibana Indawo yokusebenzela kaGoogle kweli nqaku.
tags: Izikhombisi zeBrand zokuchonga uMyalezoukuhanjiswadkimdkim utyikityodkim isingqinisisoI-DMARCdnsUbungqina boQinisekiso loMyalezoDomainKeys Imeyile echongiweyoungqinisiso lwe-imeyileindlela yokuvavanya i-dkimindlela yokuvavanya i-dmarcUkunika ingxelo kunye nokuhambelanaInkqubo-sikhokelo yomgaqo-nkqubo womthumelispf
Cofa umkhondo ukuze ufowunele uQhagamshelwano kwiMisitho yezibalo zikaGoogle usebenzisa uMphathi weTag kaGoogle